Dhaq dhaqaaqyo ciidan & Cabsi dagaal oo laga soosheegayo gobolo ka tirsan Konfurta dalka – SBC
Dhaq dhaqaaqyo ciidan & Cabsi dagaal oo laga soosheegayo gobolo ka tirsan Konfurta dalka
Posted by Webmaster on May 1, 2012 Comments
Dhaq dhaqaaqyo ciidan iyo isku hub urursi ayaa ka jira qeybo ka mid ah gobolada Koonfureed ee dalka siiba gobolada jubooyinka iyo Bakool.
Saraakiil ka tirsan ciidamada DKMG ah ee deegaanada goboladaasi ayaa saxaafada u sheegay in ay soconayaan xiisado dagaal iyo diyaar garow ay ku damacsan yihin in ay weeraro kula wareegaan deegaano ay iminka ku suganyihiin xarakada Mujaahidiinta Alshabaab.
ilo wareedyo la isku haleyn karo oo ku sugan deegaano ka mid ah gobolada jobooyinka iyo Bakool ayaa sheegaya in ay soconayaan dhaq dhaqaaqyo labada dhinacba ah oo u muuqda mid u diyaar garow dagaal.
Xalay ayay aheyd markii deegaano ka tirsan gobolka Bakool ay ka dheceen dagaalo xoogan oo dhexmaray xarkaada Shabaab Almujaahidiin iyo weliba Ciidamada DKMG ah kaasi oo sida saraakiil ka tirsan ciidamada DKMG ah sheegeen ahaa kuwo culus qasaarana ay ka dhasheen.
qeybo ka mid ah goboladaasi waxaa gacanta ku haya ciidamada DKMG ah ee Soomaaliya, waxaana jira weeraro ay ku qaadaan xarakada Alshabaab goobo ay degen yihiin ciidamada dkmg ah kuwasi oo mararka qaar sababa khasaare dhinac walba leh.
Sikastaba ha ahaatee dadka rayidka ah ee ku dhaqan deegaanadaasi ayaa ay soo food saartay casi xoogan oo ku aadan dhinacyadan isku haya deegaanada ay ku dhaqan yihiin.